Golaha Wasiiradda Cusub Oo 80% Noqon Doona Xubno Aan Ka Tirsanayn Barlamaanka Federalka.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay inay Madaxweyne Farmaajo, Guddoomiye Jawaari iyo Ra’isul-wasaaraha magacaaban, Xasan Cali Kheyre isla qaateen Istaraatijiyadda Xubnaha Golaha Wasiiradda ee la soo dhisi doono.
Madaxdu waxay is-hoga tusaaleeyeen in loo baahan yahay in inta badan Wasiirada Cusub ka yimaadaan bannaanka, halkii horey Xildhibaanadda BFS looga soo dooran lahaa.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku taliyey in la kala jiheeyo Xildhibaanadda BFS iyo xubnaha Golaha Wasiiradda, si aan Xildhibaanadda loo saarin culaab Maamul iyo inay isku qabtaan xilalka Wasiir iyo Xildhibaan.
Guddoomiyaha BFS, Prof. Jawaari ayaa u riyaaqsan Taladaasi, wuxuuna had iyo jeer ku baaqi jirey in Xildhibaanadda u Khaas noqdaan Sharci-dejinta iyo Hawlaha culus ee Barlamaanka.
Madaxweyne Farmaajo, Guddoomiye Jawaari iyo Ra’isul-wasaaraha magacaaban, Xasan Cali Kheyre ayaa isla qaatay in 80% xubnaha Wasiiradda Cusub ka yimaadaan meel ka baxsan Xildhibaanadda BFS, si loo helo Shaqo Hufan iyo Isla-xisaabtan Joogto ah.
Warar Loo-qaateen ah ayaa sheegayo haddii ay Xildhibaanadda BFS berrito codka Kalsoonida siiyaan Raisul-wasaare Kheyre inuu soo dhisi doono Xukuumad ka kooban 15-Wasiir iyo Wasiiro-dowlayaal kooban.
Si kastaba ha ahaatee, Tirada Wasiiradda cusub haddii la badiyo ama la yareeyo, waxaa lagu khasban yahay in lagu saleeyo Nidaamka Awood-qeybsiga Beelaha Soomaaliyeed ee Habk marjaca u noqday Dowladihii isaga kala dambeeyey Talada dalka tan iyo sannadkii 2007-dii.